လူသိနည်းသော မိုက်ကယ်အဲရစ်၏ စွန့်လွတ် အနစ်နာခံမှု အကြောင်း တစေ့ တစောင်း ~ Rohingya Blogger
လူသိနည်းသော မိုက်ကယ်အဲရစ်၏ စွန့်လွတ် အနစ်နာခံမှု အကြောင်း တစေ့ တစောင်း
အပြင်မှာ ကျနေတဲ့ နှင်းဖွဲလေးတွေကို ကြည့်ရင်း နှင်းတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံက တောင်တန်းတွေကို ကိုယ်သတိရ မိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်က ဘူတန် ဘုရင် မိသားစု ၀င်တွေ ကို စာသင်ပေးနေတဲ့ အချိန်၊ စုကတော့ တော်ဝင်နိုင်ငံခြား ရေးရာ ဌာနမှာ သုသေသနပြု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ ။ ဟိမ၀န္တာတောင်ပြာ တန်းကြီးတွေရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် အပူအပင် ကင်းကင်းနဲ့အများ အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ခွင့် ရခဲ့ ကြတယ်လေ။ မင်းကို ချစ်ရေး ဆိုခဲ့တုန်းက၊ တခြား မိန်းကလေးတွေလို “ချစ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ အဖြေစကား မျိုးကို အနှောင်အဖွဲ့ ကင်း ကင်းနဲ့ ရခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ “မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အရေးကို ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်တွင်းကို ပြန်ပြီး မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်ဖို့ခွင့်ပြုရမယ်” ဆိုတဲ့ သဘောတူ ညီမှု အရင်ရပြီးမှ သာ ကိုယ့်အချစ် ကို မင်းက လက်ခံခဲ့တာ လေ။ အဲဒီ အချိန် ကတည်းက မင်းရဲ့ နှလုံးသားမှာ တိုင်းပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသာ ပထမ နေရာမှာ ရှိနေခဲ့ တယ်ဆိုတာကို ကိုယ် ကောင်းကောင်း နားလည် သဘောပေါက် ခဲ့ပါတယ်။ မင်းရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အတွက် နားလည်မှု ရှိစွာနဲ့ ပါရမီဖြည့်ပေးဖို့လဲ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ရဲ့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၁၆ နှစ်သာ ကာလမှာ မင်းဟာ ဇနီးကောင်း၊ မိခင်ကောင်း ပီသစွာနဲ့အိမ်ထောင် တာဝန် ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း တာဝန်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အလုပ်တာဝန်က တဘက်နဲ့အိမ်ကို အမြဲတမ်း သပ်သပ် ရပ်ရပ်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ထားတတ်တဲ့ အကျင့်၊ ကလေးတွေအတွက် မွေးနေ့တွေ၊ ပျော်ပွဲ ရွင်ပွဲတွေကို မပျက်မကွက် လုပ်ပေးခဲ့ အကျင့် တွေကြောင့် ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ မင်းဟာ စံပြအိမ်ရှင်မ ဖြစ်လို့ နေခဲ့တယ်။ သားနှစ်ယောက် အသက် ၁၂နှစ်နဲ့၁၄ နှစ် အရွယ်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ၊ မင်းမေမေ ( ဒေါ်ခင်ကြည်) နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဖုန်းရပြီး၊ မြန်မာပြည်ကို မင်းပြန်သွားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီခရီးဟာ ကိုယ်တို့့မိသားစုရဲ့ ကွဲကွာခြင်းအစလို့ကိုယ်တို့ အားလုံး ကြိုတင် မသိထားခဲ့ကြဘူးနော်။ စုရေ မင်းဟာ…အိမ်ထောင်ရှင် မကောင်း တစ်ဦး အဖြစ်၊ မိခင်ကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ရုံတင် မကပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးကောင်း တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်လို့နေပြန် ပါရောလား။ မေတ္တာတရားပြည့်ဝတဲ့ မိခင် တစ်ဦး ဘ၀ကနေ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ တဲ့ မြန်မာ အမျိုး သမီး တစ်ဦး အဖြစ်ကနေ တိုင်းပြည်က လိုအပ်လာပြီဟေ့ ဆိုတဲ့အခါမှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ကူးပြောင်းပြီး လူထုကို ဦးဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။ မိခင်တစ်ဦးအနေနဲ့ရော၊ အိမ်ထောင်ရှင်မ တစ်ဦးအနေနဲ့ ပါ သားတွေကို စွန့် ၊ ခင်ပွန်းကို ထားသွားပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်နေတဲ့ မင်းရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ လုပ်ရပ်ကို မင်းသူငယ်ချင်း အချို့က နားမလည်စွာနဲ့ပြောဆိုဝေဖန်ကြတိုင်း သားငယ်ကင်မ်က “မေမေဟာ သူလုပ်ရမယ့် အလုပ် တွေကို လုပ်နေတာပါ” လို့ပြန်ပြောလေ့ရှိတယ်။ “ကျွန်မသားတွေ ကျွန်မကို လိုအပ်နေကြမှာကို ကျွန်မ အကြောက်ဆုံးပဲ” လို့မင်းပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ငန်း တစ်ခုတည်း အပေါ် အာရုံထားဖို့ ၊ ကလေးတွေ အတွက် မပူပန်ဖို့ဖုန်းထဲကနေ ကိုယ့်ပြောစကားတွေ ဟာ ကလေးတွေ အပေါ် တာဝန်ကျေချင်လွန်းတဲ့ မင်းအတွက် စိတ်ဖြေစရာ ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကိုယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်တွင်းက အခြေအနေတွေ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေချိန်မှာ၊ အထူးသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးတွေ၊ သတင်းထုတ် ပြန်မှုတွေ ညံ့ဖျင်းလွန်းတဲ့ ကာလဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်တို့ သားအဖ တွေဟာ မင်းရဲ့လှုံခြုံရေးအတွက် အချိန်နဲ့အမျှ စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ ဖုန်းသံကြားတိုင်း မင်းဆီက ဒါမှမဟုတ် မင်းအကြောင်းပြောနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ယောက်ဆီက ဖုန်းလားလို့အမြဲမျှော်မိခဲ့ကြတယ်။ “မေမေဘယ်တော့ ပြန်လာမလဲ” ဆိုတဲ့ ကလေးတွေ အမေးကို ခနခနဖြေရတိုင်း ကိုယ့်ရင်မှာ မချိပါဘူး။ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို မင်းကို လုပ်ကြံကြမှာ ကိုလည်း စိုးရိမ် မိပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန် ရလွန်းတဲ့ အတွက်.. မင်းကို နေအိမ်အကျယ် ချုပ်ချ လိုက်ပြီ လို့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အချိန်မှာ အနည်းဆုံး အိမ်ထဲမှာ အသက်အန္တရာယ်တော့ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့ ဆိုပြီး ကလေးတွေကို တင်းတင်း ကြပ်ကြပ် ဖက်လို့ကိုယ်ဖြေတွေးတွေးခဲ့ပါတယ်။ မကြာခန ဆိုသလို မြန်မာ အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေ ထဲမှာ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ထားတဲ့ အတွက် မင်းမှာ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝေဖန် တိုက်ခိုက်တာ တွေ ပေါ်ထွက်လာတိုင်း ကိုယ့်ကြောင့် မင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိခိုက်တော့မလား ဆိုပြီး စိုးရိမ်ခဲ့ရသလို၊ ကိုယ့်ကြောင့် ပြောဆိုတိုက်ခိုက် ခံနေတာကို လည်း စိတ်မကောင်းကြီး စွာဖြစ်လို့ နေခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာ့အရေးအတွက် ကိုယ်လဲ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်တာမို့မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွေကို နိုင်ငံ တကာက ထောက်ခံ အားပေးမှုတွေ ရလာအောင် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး ပိုင်းမှာ လူသိများတဲ့ ပုဂိုလ်တွေ နဲ့ ကိုယ် တိတ်တဆိတ် သွားရောက်တွေ့ ဆုံပြီး စည်းရုံး လှုံ့ ဆော်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို မြန်မာ အစိုးရ ကသိသွားရင် မင်းကို ပိုပြီး ထိခိုက်မှာ စိုးတဲ့အတွက် လျှို့ ဝှက်စွာနဲ့ကိုယ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သတင်း သမားတွေ၊ အင် တာဗျူး လာတောင်းတာတွေကို လဲ ကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားခဲ့တယ်။ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကာလအတွင်း၊ အထီးကျန်နေမယ့် မင်းအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ စာအုပ် တွေ ပို့ ပေးခဲ့တယ်။ နယ်ဆလ်မင်ဒဲလားအကြောင်း၊ ဂန္ဒီအကြောင်း အစရှိတဲ့ စာအုပ်တွေ ဟာ မင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုယ်ထင်ပါတယ်။ အိမ်က နံရံမှာ မင်းပုံ ခပ်ကြီးကြီး တစ်ပုံကို ချိတ်ထားပြီး၊ ဧည့်ခန်း ထဲမှာ မင်းအတွက် နိုင်ငံတကာက ချီးမြှင့်ထားတဲ့ ဆုတံဆိပ် မျိုးစုံ တွေရယ်၊ မင်းရထားတဲ့ နိုဘယ်ဆု အပါအ၀င် တခြား ဆုတံဆိပ်တွေ မျိုးစုံကို ကိုယ် ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ခင်းကျင်းပြင်ဆင်ထားတယ်။ စုရေ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့အထိန်းသိမ်းခံ ဘ၀ဟာ မင်းအတွက် ရော၊ ကိုယ့်အတွက်ပါ အင်မတန် ရှည်လျားတဲ့ ကာလတွေပါ။ တခါတလေ မင်းအကြောင်း ဘာသတင်းမှ မကြားရတော့ပဲ လပေါင်းများစွာ ကြာသွားတဲ့ အခါတွေမှာ လူမသိ သူမသိဘ၀နဲ့မင်းသေများ သွားပြီ လားလို့တွေးပူနေချိန်မှာ ဒေါ်စုအိမ်က စနရားသံကြားရတယ်လို့သတင်းကြား လိုက်ရလို့ကိုယ့်မှာ ပြောမပြ တတ်လောက်အောင် စိတ်သက်သာရာရ သွားတဲ့ အကြိမ်တွေလဲ မနည်းခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မင်းအသက်ရှင်နေကြောင်း မျှော်လင့်လို့ ရတဲ့ စနရားသံတောင် မကြားရတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်သွေးပျက် ခဲ့ရပါတယ်။ စနရားပျက် သွားတာပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေကြေးကြပ် တည်းလို့ ရောင်းလိုက် ရတာများလား ဆိုပြီး တွေးပူရ သေးတယ်။ ကိုယ့်ဇနီးသည် တစ်ယောက်တည်း အားငယ်နေချိန်၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ခင်ပွန်းသည် တစ် ယောက် အနေနဲ့ရှေ့ ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး၊ ဒါမှမဟုတ် အနားမှာ အားပေးခွင့်တောင် မပေးနိုင်တဲ့ ဘ၀ကိုလဲ ငါမုန်းတီးမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများကောင်းကျိုးအတွက် သတိရှိရှိနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ မင်းလို မိန်းမအာဇာနည်ရဲ့ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်ရတာကိုတော့ ကိုယ် အမြဲတမ်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခု ရဲ့နေ့တစ်နေ့မှာ ဖုန်းထဲက နေမင်း အသံကို စကြားလိုက်ရပြီး၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက် လာပြီလို့သိလိုက်ရတော့ ကလေးနှစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး ကိုယ်တို့တွေ ပျော်ပျော် ပါးပါးနဲ့ မြန်မာပြည် ကို အပြေးသွား ခဲ့ကြတယ်။ သားငယ်ကင်မ် က လူပျိုကြီးဖားဖား ဖြစ်နေတာကို မြင်တော့ အပြင်မှာတွေ့ရင်တောင် ရုတ်တရက်မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မင်းပြောခဲ့သေးတယ်နော်။ စုရေ ..တယောက်တည်း အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ နေခဲ့ရပေမယ့် မင်းဟာ အရင်က ထက်တောင် ပိုပြီး တည်ငြိမ်လာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ပန်းတွေပန်ထားတဲ့ နူးညံ့တဲ့ အပြုံးအောက်က ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့့သံမဏိ စိတ်ဓာတ်တွေကို ကိုယ်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အသက်အရွယ် မရွေးပါဝင်တဲ့ မင်းရဲ့အသင်းသူ၊ အသင်းသားတွေကို ဦးဆောင်မှုပေးနေတာ မြင်ရတော့ ငါတို့ မိသားစုတွေ ကွဲကွာနေကြရတာ အလကား မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ်ကျေနပ်ခဲ့မိပါတယ်။ အဲဒီ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဟာ မင်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ ခဲ့ကြရတာပဲနော်။ ၁၉၉၈ ရောက်တော့ ကိုယ့်မှာ ကင်ဆာဖြစ်နေပြီ၊ နောက်ဆုံးအဆင့်လို့သိလိုက်ရတော့ ကိုယ်အရမ်းကို ချောက်ခြားသွားတယ်။ လူ့လောကကြီးထဲ နေရဖို့အချိန်သိပ် မကျန်တော့လို့ ၊ မသေခင်မှာ မင်းကို လူချင်းတွေ့ ပြီး နှုတ်ဆက်သွားချင်တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာသံရုံး ကို သွားပြီး ဗီဇာ လျှောက်ထားပေမယ့် ခွင့်မပြုခြဲ့ကဘူး။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ဗီဇာငြင်းပယ်မှုကို အားမလျော့ပဲ ကိုယ် ထပ်ကြိုးစားပေမယ့် နောက်ဆုံး အကြိမ်ပေါင်း ၃၀လောက် ရှိလာတော့ ကိုယ်အားလျော့ လာမိပြီ၊ ခန္ခာကိုယ်က လဲ သိသိသာသာကို အားနည်းလာတယ်၊ ကိုယ့်အဖြစ်ကို စာနာပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့အမေရိကန်သမ္မတ ကလင်တန်တို့ အပါအ၀င် တခြား မိတ်ဆွေ တွေက မြန်မာ အစိုးရဆီကို မေတာရပ်ခံစာ ရေးခဲ့ကြပေမယ့် ဗီဇာမရခဲ့ပါဘူး။ ဆိုးဝါးရက်စက်လှတဲ့ ကံကြမ္မာကို ပဲ ကိုယ် တို့အပြစ်တင်ခဲ့ကြရတယ်။ မင်းဆီကို စစ်အရာရှိတစ်ယောက်က လာတွေ့ ပြီး ကိုယ်နဲ့လာတွေ့ဖို့အင်္ဂလန်ကို အချိန်မ ရွေး ပြန်နိုင်ကြောင်း၊ လိုအပ်တဲ့ ဗီဇာကို ချက်ခြင်းထုတ်ပေးမယ့် အကြောင်းလာပြောတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပြန်ကြား ရတယ်။ အမှန်အတိုင်း ပြောရင် မသေခင်၊ ဝေဒနာတွေ ခံစားနေရချိန် မှာ မင်းကို အနားမှာ သိပ်ရှိနေစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က နေထွက်လာပြီးရင် ပြည်ဝင်ခွင့်အပိတ်ခံရမှာ မို့မင်းကို ယုံကြည်အားထားနေတဲ့ ပြည်သူလူထု ကို မင်း ဘယ်လို အင်အားနဲ့ မှ ထားရက်ခဲ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်သိနေပြီးသားပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့မိသားစုအရေး ပြတ်ပြတ် သားသား ရွေးချယ်ရမယ့် အခြေအနေတစ်ခု ကို စစ်အစိုးရက အတင်း ဖန်တီးနေခဲ့ပေမယ့်၊ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်က အဲဒီလို အဖြစ်မခံခဲ့ကြဘူးနော်။ ကိုယ်တို့ချစ်သူတွေ မဖြစ်ခင်ကတည်းက တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေသာလျှင် ပဓာန ဆိုတာ နှစ် ယောက်စလုံး နားလည် သဘောတူခဲ့ပြီးသားမို့ ၊ မင်းပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကိုယ်တို့ ဆွေးနွေးစရာတစ်ခု အနေ နဲ့ တောင် မယူဆခဲ့ကြဘူး။ စုရေ.. ကုစရာဆေးမရှိတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာတွေကို အံကြိတ်ခံစား ရင်း…ဗြိတိသျှ သံရုံးက နေ တဆင့် မင်းဆက်လာမယ့် ဖုန်းကို မျှော်ရင်း၊ ပြန်ဆုံကြမယ်လို့ ကြိုးစားပြီး အားခဲနေခဲ့ပေမယ့်၊ ကိုယ် လမ်းတောင် ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်လောက်အောင် အားအင်တွေ ချိနဲ့ လာနေပြီ။ တကယ်လို့ကိုယ်သေသွားခဲ့ရင် ကိုယ့်ကို လာမတွေ့နိုင်တဲ့အတွက် မင်းစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ ၊ ကိုယ်တို့ မိသားစု အနစ်နာခံကြရတာတွေ အချည်းနှီးမဖြစ်ပါစေနဲ့ ။ မင်းကို ပိုပြီး လိုအပ်နေကြတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ပါနော်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရလာပြီး နောင်လာနောက်သားတွေ ကောင်းစားတာကို ကိုယ်မြင်တွေ့ သွားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် အမြင်တွေ ကေ၀၀ါးလာနေပြီ..အသက်ရှုရတာလဲ ပိုပြီးခက်လာတယ်…ဟိုး ခပ်ဝေးဝေး မှာ အပြေးလှမ်းလာနေတဲ့ မင်းရဲ့ပုံရိပ်ကလည်း ဝေးလို့ ဝေးလို့ကျန်နေခဲ့ပြီ…..
(မိုက်ကယ်၏ အမြွာညီအစ်ကို အန်ထော်နီရဲ့ပြောကြားချက်အရ ဒေါ်စု က ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မိုက်ကယ်အဲရစ်မသေခင် နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့ ဗီဒီယို အခွေ ကို ဗြိတိသျှ သံရုံးကနေ တဆင့် မိုက်ကယ့်ဆီကို ပို့ ပေးခဲ့ပေမယ့် အဲဒီခွေဟာ မိုက်ကယ်ဆုံးပြီး ၂ ရက်အကြာမှ ရောက်လာခဲ့တဲ့ အတွက် မိုက်ကယ်ကြည့်ခွင့် မရလိုက်ဘူးလို့ သိရပါတယ်) ၀န်ခံချက်၊ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မိုက်ကယ်အဲရစ်အကြောင်း ကျွန်မဖတ်ဖူးသော စာများမှ အချက်အလက်များကို ကိုးကားပြီး မိုက်ကယ် အဲရစ်နေရာမှ ခံစားရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစုံတရာ အမှားအယွင်းရှိခဲ့ပါက စာရေးသူရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါကြောင်း။
1 1. The untold love story of Burma’s Aung San Suu Kyi By Rebecca Frayn (Telegraph, Dec 11, 2011)
Posted by www.littlevoicefromburma.blogspot.com Michael Aris – Wikipedia, the free encyclopedia
Michael Vaillancourt Aris (27 March 1946 – 27 March 1999) wasaleading Western authority on Bhutanese, Tibetan and Himalayan culture and wrote numerous books on Buddhism in those regions. He was the husband of Burmese opposition politician Aung San Suu Kyi. — with Thesu Kyaw. Written by လျှံ မုန်း အိမ် Source :ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန Newer Post
Anonymous12 April 2012 15:57ထွင်သမျှဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ..ဒီဇာတ်လမ်းကို စိတ်အပျက်ဆုံးပဲ....သေတဲ့လူက သေသွားပြီ.... သူ့ဘာသာသူထားလိုက်ပါတော့....တကယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ လွမ်းလောက်အောင် လုပ်ဇာတ်တွေခင်း...ပြီးရင် တဖက်က အမြင်မတူ ဆန့်ကျင်သူတွေရဲ့ အပြောအဆိုလည်း ခံရဦးမယ်...ကျနော်သဘောထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြည်ညိုလေးစားပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူ့ယောက်ျားတော့မပါဘူး.....အဲဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မိတိုင်း..စိတ်ထဲမှာ ကလိကလိနဲ့...မွှမ်းချက်က အစွန်းရောက်လွန်းလို့....ReplyDeleteAdd commentLoad more...